, चियाको अवैध निकासी : देख्दैन प्रशासन, सांसद गर्छन् गुनासो
चियाको अवैध निकासी : देख्दैन प्रशासन, सांसद गर्छन् गुनासो
इलाम,६ भदौ । “चियाको बारेमा त बोल्न पनि मन लाग्दैन । गाडीका गाडी भारततर्फ चिया जान्छ कोही देख्दैन”, राससलाई चिया उद्योगी तथा प्रदेश नं १ का सांसद काजीमान कागतेले फोनमार्फत यस्तो प्रतिक्रिया दिनुभयो । कागतेले शुरुमै भन्नुभयो, “यो चिया कसरी जाँदैछ ? प्रशासनले के हेरेर बसेको छ ? स्थानीय तह किन बोल्दैन”, कागतेले आफ्ना कुरा राख्नुभयो र सम्पर्क विच्छेद गर्नुभयो । यो कागतेको यो शैलीले चिया व्यापारमा देखिएको समस्या झल्काउँछ ।
आफै प्रदेश सांसद भएपनि अवैध तवरले चिया गइरहेको बारेमा भने कागतेले स्थानीय तह र जिल्ला प्रशासनलाई दोष दिँदै हुनुहुन्थ्यो । कागतेले मात्र होइन सूर्योदय नगरपालिकाका चिया उद्योगीले चियाका सन्दर्भमा राख्ने पहिलो समस्या बनेको छ ‘अवैध निकासी’ । चियाको सन्दर्भमा होस् वा अन्य कुनै विषय । पछिल्लो समय अवैध रूपमा भारततर्फ हरियो चियापत्ती निकासी हुँदा नगरभित्रका उद्योग सङ्कटमा पर्न थालेको उद्योगी गुनासो छ । पछिल्लो समय चिया किसानले रातारात विभिन्न माध्यमबाट भारततर्फ चिया गइरहेको उद्योगी बताउँछन् । भारतीय सीमामा पर्ने सूर्योदय नगरपालिकाबाट खुला सीमा रहेको दार्जिलिङ सहज रूपमा जान सकिन्छ । त्यही बाटोबाट पछिल्लो समय हरियो चियापत्ती निकासी भइरहेको उद्योगीको दाबी छ ।
थोरै परिमाणमा मात्र नभइ गाडीका गाडी हरियो चियापत्ती भारत निकासी हुने गरेको बताउँनुहुन्छ चिया उद्योगी उदय चापागाईं । “अहिले गाडीका गाडी, घोडाका घोडा चिया अवैध तवरबाट गइरहेको छ”, चापागाईं भन्नुहुन्छ, “छब्बीसेलगायत नाकाबाट ठूलो परिमाणमा चिया गइरहेको छ, यसमा कसैको चासो छैन । इलामबाट दार्जलिङतर्फको छब्बिसे, खोला गोदाम, नाखापानी र हिले भञ्ज्याङहुँदै अवैध रूपमा चियाको हरियो पत्ती निकासी हुने गरेको उद्योगीको भनाइ छ ।
यसरी अवैध रूपमा चिया जानु नगरको कार्यविधि विपरीत रहेको बताउनुहुन्छ सूर्योदय नगरपालिकाका चिया सचिवालय संयोजक देवेन्द्र शर्मा । “हामीले बनाएको चिया मापदण्डमा पहाडको चिया तराइ वा भारततर्फ र तराइको चिया पहाड ल्याउन नपाउने मापदण्ड छ तर यसरी भारततर्फ लैजानु कानून विपरीत हो”, शर्मा बताउनुहुन्छ । नगरको ‘गुणस्तरीय चिया उत्पादन मापदण्ड कार्यान्वयन कार्यविधि–२०७५’ उत्पादन मापदण्ड(३) मा पहाडी भूगोलको चियामा हुने मौलिक गुणस्तरमा कायम गरी चिया उत्पादन प्रशोधन गर्न गराउनु पर्ने र हरियो चियापत्ती भारत तथा तराईतर्फ र तराईबाट पहाडतर्फ ल्याएर प्रशोधन गर्न नपाइने लेखिएको छ ।
यस विषयमा आफूहरूको ध्यानाकर्षण भएको र अवैध निकासी रोक्न पहल शुरु गरेको सचिवालय संयोजक शर्माको भनाइ छ । तर, शर्माले उद्योगीले नगरको मापदण्डमा नटेको कुरा उल्लेख गर्नुहुन्छ । तीन वर्ष अघि नै ऐन बनेर कार्यविधि बन्दासमेत अहिले ‘विषमपरिस्थिति नै भन्दै’ नगरको मापदण्डअनुसार उद्योगीले किसानलाई हरियो चियापत्तीको मूल्य नदिएको शर्मा जिकिर गर्नुहुन्छ । यता, चिया तथा कफी विकास बोर्डका प्रवक्ता दीपक खनालसमेत आफूले चिया अवैध रूपमा चिया भारत जाने गरेको बारे थाहा पाएको उल्लेख गर्नुहुन्छ । नेपालको चिया अवैध तवरले भारततर्फ जानु दुःखद् रहेको बताउँदै खनालले यस बारेमा स्थानीय तहलाई जानकारी गराएको बताउनुहुन्छ । उहाँले भन्नुभयो, “हामीले चिया भारततर्फ जाँदै छ भनेर भन्ने हो । भनिसक्यौ ।”
यति हुँदाहुँदै पनि अहिले पनि प्रशासनको निगरानी सबै तिर चुस्त रहेको बताउनुहुन्छ जिल्ला प्रशासन कार्यालय इलामका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी मोहन न्यौपाने । न्यौपानेका अनुसार चियाको विषयमा केही दिनअघि उद्योगी, किसान, स्थानीय तह(सूनपा)का प्रतिनिधिसहित बैठक नै बसेको थियो । बैठकमा उद्योगीले अवैधतवरबाट चिया भारत निकासी भएको बारे प्रशासनलाई जानकारी गराएका थिए । पछिल्लो समय भने चियाका विषय नउठेकाले चिया जान छाडेको दाबी प्रशासन कार्यालयको छ ।